Sunday July 07, 2019 - 17:45:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Itoobiya ayaa qarka usaaran in ay soo gaba gabeyso biya xireenka murunka badan dhaliyay ee ay ka dhisayso halka ay uu ka askumo webiga Alniil oo ah wabiga ugu weyn caalamka.
Markii ugu horraysay muddo sanad iyo bar kadib ah ayay dowladda Xabashida Itoobiya u ogolaatay wariyaasha in ay gudaha ugalaan biya xireenka oo dhisme aad u xooggan uu ka socdo.
Markii uu Abiy Axmed noqday R/wasaaraha Itoobiya ayuu mamnuuc ka dhigay in saxaafaddu gasho halka laga dhisamayo biya xireenka Alnahda oo noqon doona mid ugu weyn qaaradda Afrika.
Itoobiya ayaa wixii xilligaas ka dambeysay dardar gelisay dhismaha biya xireenkan waxaana la sheegay in uu ku dhowyahay in ladhameystiro, wariyaal booqday halka biya xireenka laga dhisayo ayaa soo sheegay in uu qarka usaaranyahay dhameystir waxayna carabaabeen in dhismuhu uu yahay mid xawaare sare ku socda.
Shirkadii qandaraaska uheysatay dhismaha biya xireenka ayaa rukhsadii lagala laabtay waxaana lagu wareejiyay shirkado ajnabi ah, injineerkii guud ee qaabilsanaa dhismaha alnahda ayaa sanaddii lasoo dhaafay isku daldalay magaalada Addis Ababa arrinkaas oo dib dibudhac ballaaran keenay.
Dowladda Itoobiya waxay doonaysaa in biya xireenkan uu qasnadda dowladda soo geliyo sanad walba lacago ballaayiin dollar ah si ay uga baxdo faqriga indhaha ka riday shacabka Itoobiya wadankan aan badda laheyna uu u helo ildhaqaale oo lagu tiirsanaan karo.
Afraam Kandaan oo ah ku xigeenka maamulaha mashruuca biya xireenka Alnahda ayaa warbaahinta u sheegay in meel wanaagsan uu marayo dhismahan isagoo iska indha tiray halista uu biya xireenkan ugeysan karo wadamada Suudana iyo Masar oo ah isha biyaha ay ku tiirsanyihiin shucuubtooda.
Markii ugu horraysay ayay wariyaashu galeen halka lagu magacaabo buxeyrada biya xireenka oo ah bad yareey muddo 7 sanadood ah lagu keydinayay biyaha laga leexiyay wabiya Niil waana meesha lafdhabrta u ah korontada ay itoobiya ka dhalinayso biyaha wabiga Alniil.
Saxafiyintu waxay sheegen in ay arkeen dhulka biya laga buuxiyay iyo keydadka biya xireenka oo sidii larabay ushaqeynayay inkastoo meelaha qaar ay ka socdaan dhismooyin.
Injineer reergalbeed oo kamid ah shaqaalaha biya xireenka ayaa sheegay in ay dhiseen keydad waaweyn oo loogu talagalay in lagu keydiyo biyaha haddii ay dhacdo in uu fataho biya xireenka Alnahda wuxuuna carabaabay in uu jiro qodista dhul baxaad leh oo suurtagal ay tahay in itoobiya ay ku leexiso biyaha wabiga Niil arrinkaas oo musiibo ukeeni kara malaayiin qof masaari iyo suudaan ah oo noloshoodu ku tiirsantahay biyaha wabiga niil.
Biya xireenka Al Nahda ayaa ku fadhiya baaxad dhan 1800 KM2 waxaana jira maalgelin baaxad leh oo shirkado ajaanib ah ay ku sameynayaan mashruucan Korontada looga dhalinayo biyaha wabiga.
dowladda Itoobiya waxay saadaalinaysaa in dhismaha biya xireenkan lasoo gaba gabeeyo dhammaadka sanadda 2022-ka sidaasna ay ku noqoto dowladda koowaad ee ugu soo saaridda badan dhanka korontada qaaradda afrika.
Itoobiya waxay bilaabi doontaa in inta badan dowladaha qaaradda Afrika ay u iibgeyso korontada laga dhalin doono biya xireenka Alnahda waxayna khubaradu sheegayaan in korontadan ay gaari karto qaaradda Yurub iyadoo loosii marinayo wadamada dhaca galbeedka qaaradda Afrika.